आजको न्युज सोमबार, साउन ५, २०७७, १४:५७:००
काठमाडौँ । मानिसहरुलाई आफ्नो माटोको महत्व तब धेरै हुन्छ, जब टाढा बस्नुपर्छ । ठिक त्यसैगरी हामीलाई हाम्रो आमाको महत्व पनि आमाबाट टाढा हुँदा मात्रै आभाष हुने हो । भाग्य र भविष्य अज्माउन हामी आफ्नो मातृभूमि त छोड्छौँ । तर हृदयको कुनामा त्यो प्राणभन्दा प्यारो मातृभूमि सधैँ बास गरिरहन्छ । मातृभूमि र जन्म दिने आमाको महत्वलाई मनन गरेरै होला जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरयसि भनिएको पनि । तर ती दुई कुरा साँच्चिकै स्वर्ग हामीलाई तब लाग्छ, जब हामी त्यसबाट अलग हुन्छौँ । भविष्य निर्माणको उज्ज्वल सपना देखेर विदेश गएकाहरु मातृभूमिको मूल्य आफ्नो भाषा र संस्कृतिको सेवा गरेर तिरिरहेका हुन्छन् । धेरै जसो त्यसमध्येकाहरु आफ्नो भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजको निरन्तरतामा यसलाई सीमित गर्छन् त कोही भने साँच्चिकै आफ्नो अद्भूत क्षमताले त्यो भाषा संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा चिनाउन सफल हुन्छन् ।
सात समुद्र पारि अमेरिकाको टेक्सास सहरमा बसोबास गरिरहेकी नेपाली नारी काजल कर्णलाई पनि सुरुका दिनमा आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण आफ्नो समुदायले मनाउने चाडबाड र रीतिरिवाजको निरन्तरता नै थियो । नेपालको पवित्र भूमि जनकपुरबाट अमेरिका पुगेकी काजलले जब आफ्नो अदभूत मिथिला संस्कृतिको महत्व बुझ्दै गइन्, उनलाई लाग्यो अब यो कला संस्कृति र यो वेशभूषालाई आफूले मात्रै होइन, संसारलाई चिनाउनुपर्छ ।
मानिसहरु जब आफ्नो भूगोल छोडेर बिरानो भूमिमा प्रवेश गर्छन्, तब आफ्नो मातृभाषा बोल्न हिच्किचाउँछन् । अमेरिकामा बसोबास गर्नेहरु आफ्नो मातृभाषा छोड्दै हिन्दी या अंग्रजी बोल्न थाल्छन् । आफ्नो मातृभाषामा बोल्दा आफू कमजोर भएको लघुताभाष हुने गर्छ मानिसहरुलाई । यो सबै आफ्नो आँखाले देखिरहेकी काजलले अठोट लिइन् कि मातृभाषा बोल्नु कमजोर हुनु होइन, आफ्नो संस्कृतिलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउनु अविकसित हुनु होइन । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ मिथिला भाषा संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा चिनाउने काजल कर्णको अभियान ।
आधुनिकता सोचमा हुने हो । पहिरनमा होइन भन्ने सोचका साथ काजल कर्णले एउटा अभियान आरम्भ गरिन्– मिथिला भाषा संस्कृति संसारलाई चिनाउने । काजलले यो अभियान सुरु गर्नुअघि पनि अमेरिकामा मिथिला समुदायका मानिसहरु आफ्नो चाडबाडहरु सामूहिक रुपमा मनाउने गर्थे । मूलतः महिलाहरु लक्षित गरी काजल कर्णले मिथिला संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा चिनाउने अभियान आरम्भ गरिन् ।
उनले सम्पूर्ण मिथिला नारीहरुलाई उत्साहित बनाउने अभियानको रुपमा सुरुमै एउटा नारा स्थापित गरिन् । ‘मिथिला के नारी कतबो मोर्डन तैयो संस्कारी, दुनिया के कोनो कोना मेँ रही अप्पन मातृभाषा से जरुर प्रेम करी’ यो उनको नाराले एकातिर घुम्टोमा सीमित हुन चाहने मिथिलाका नारीहरुलाई खुलेर समाजमा आउन आह्वान गरेको छ भने विश्वका कुनै कुनामा रहे पनि आफ्नो भाषालाई माया गर्न आह्वान गरेको छ ।
काजलको विचारमा आफ्नो संस्कृतिलाई जीवित राख्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम भनेको उसको भाषा हो । त्यसैले विभिन्न मञ्चमार्फत उनले मैथिली भाषाको जगेर्नाका लागि सारा संसारमा रहेका मैथिलहरुलाई आह्वान गरिन् । आधुनिकता र संस्कारलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने काजलको यो अभियान यति सफल भयो कि हिजोका दिनमा आफूलाई मैथिली भाषी भनेर खुल्न समेत नचाहनेहरु आफू मात्रै मैथिली अभियानमा समावेश भएनन्, आफ्ना नयाँ पुस्ताका बालबालिकालाई समेत आफ्नो भाषालाई माया गर्न प्रेरित गर्न थाले ।
उनले यसका लागि सुरुमा मैथिली डिभा युएस नामको फेसबुक पेजमार्फत यो अभियानको आरम्भ गरेकी थिइन् । उनको यो अभियानसँग संसारभर बसोबास गर्ने मैथिल समुदायका मानिसहरु लाखौँको संख्यामा जोडिएका छन् । उनी आफ्नो समुदायमा यति धेरै चिरपरिचित भइसकेकी छिन् कि उनलाई यतिबेला मैथिल संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेबापत विभिन्न पुरस्कार र सम्मानहरुले विभूषित पनि गरिसकिएको छ ।
हुन त काजल आफूलाई चिनाउन यो अभियानमा लागेकी पक्कै थिइनन् । किनकि कर्ण यसअघि नै दक्षिण पूर्वी एसियाका महिलाहरुको लागि गरिएको एक प्रतिस्पर्धामा पपुलर क्राउन बिजेता समेत भइसकेकी थिइन् । एउटा सफल व्यवसायी मात्रै होइन, सामाजिक अभियान्ताका रुपमा समेत आफूलाई सफल रुपमा चिनाइसकेकी काजलका लागि जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट चाहिँ यही मैथिल भाषा संस्कृतिको अभियान्ता बनेपछि भएको छ । उनले फेसबुक पेजमार्फत सुरु गरेको यो अभियान वास्तविक रुपमै यति सफल भएको छ कि मैथिल समुदायको नयाँ पुस्ताले उनलाई आफ्नो रोल मोडलका रुपमा ग्रहण गरिसकेको छ ।
समुदायको उत्साह र प्रेमले काजल कर्ण अब फेसबुक पेजमा मात्रै होइन, भूगोलमै यस समुदायका लागि काम गरिरहेकी छिन् । स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी सिर्जना मात्रै होइन, गरिबी निवारण र विभिन्न हिंसाबाट पीडित भएका महिलाहरुको उत्थानमा काजल कर्ण र उनको समूहले काम गरिरहेको छ ।
काजल कर्ण आफ्नो समुदायका लागि यतिकै प्रेरणाको स्रोत बनेकी होइन । उनले मैथिल संस्कृति र मैथिली भाषालाई कहिल्यै तिर्न नसकिने गुन लगाएकी छिन् । कर्णले हिन्दूहरुको धार्मिक ग्रन्थ भागवत गीतालाई मैथिली भाषामा अनुवाद गरेर त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेकी छिन् । भागवत गीता धार्मिक ग्रन्थ मात्रै होइन, मानव जीवनको सार पनि हो । यही भागवत गीतालाई मैथिली भाषामा अनुवाद मात्रै गरिनन्, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल पनि गरिन् ।
अमेजनले बिक्री वितरण गरिरहेको काजलको यो किताब भागवत गीता मैथिली बेस्ट सेलरका रुपमा आफ्नो कीर्तिमान कायम गरिसकेको छ । मैथिली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पवित्र उद्देश्य सहित गरेको यो काम व्यापारका लागि नभएको काजलले बताइन् । उनका अनुसार यो किताबको बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम अघि भनिएका सबै सेवामूलक काममा लगाउने गरिएको छ ।
मैथिली भाषामा लेखिएर अमेजन मार्फत बिक्रीवितरणका लागि राखिएको यही किताबले संसारका मैथिलभाषीहरुलाई एकसूत्रमा बाँधेको काजलको बुझाइ छ । आज गुगल सर्च इन्जिनमा मैथिली भाषाबारे जोकसैले जानकारी लिन खोज्दा यो कृति देखिन्छ । कर्णको यो कार्यले संसारभरका मैथिल समुदाय गौरव महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले त आज अमेरिकाका सबै राज्य मात्रै होइन, युरोपका विभिन्न देश, क्यानडा अस्ट्रेलिया जस्ता ठाउँमा यसका समूहहरु निर्माण भइसकेका छन् । ती ठाउँबाट मानिसहरु काजलको यो अभियानमा जोडिएका छन् ।
अमेरिकामा पनि आजको दिनमा प्रत्येक राज्यमा आफ्ना चाडबाडहरु भव्यरुपमा मनाउने अभियान चलिसकेको छ । यति मात्रै होइन काजल लगायतका अगुवाहरुको पहलमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यले मिथिला दिवसकै रुपमा घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यी सबै उपलब्धिको पुरस्कार हो काजललाई त्यो समुदायले दिएको मैथिली डिभा युएसएको पहिचान । यही समुदायले सम्मान स्वरुप दिएको पहिचानलाई नै काजलले बनाएकी छिन् आफ्नो समुदायको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्म । मैथिली डिभा इन्टरनेसनल नामको फाउन्डेसनले यस समुदायका सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट सेवामूलक काम गरिरहेको छ ।
अबको अभियान सीतालाई वीरांगनाको रुपमा चिनाउने
मैथिल भाषा संस्कृतिलाई चिनाउने महत्वपूर्ण अभियानले सफलता हासिल गरेपछि काजलको अबको ध्यान केन्द्रित भएको छ– माता सीतालाई संसारकै वीरांगनाका रुपमा चिनाउने । मैथिली भाषामा भागवत गीताको अनुवाद मात्रै होइन, मैथिल भाषा संस्कृतिलाई विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा परिचित गराइसकेपछि काजलको मनमा यस समुदायकै क्षेत्रमा अझ उत्कृष्ट काम गर्ने सोच आयो । उनले सोचिन्, आफ्नै भूमिमा जन्मिएकी माता सीतालाई संसारमा परिचित गराउने र उनको वास्तविक महिमा विश्वलाई चिनाउनेभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के होला ?
मिथिला क्षेत्रको केन्द्रको रुपमा रहेको जनकपुर माता सीताको जन्मभूमि हो । संसारका हिन्दूहरुले माता सीतालाई देवीका रुपमा पूजा गर्ने गर्छन् । माता सीताको महिमा र महत्वबिना न हिन्दू धर्म पूरा हुन्छ न भगवान राम पूरा हुन्छन्, न रामायण नै ।
संसारका हिन्दूहरुले देवीका रुपमा चिन्ने माता सीतालाई तपाईंले बाँकी विश्वलाई कसरी चिनाउने ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा उनको जवाफ यस्तो छः– संसारले माता सीतालाई त्याग तपस्या र सहनशीलताका लागि चिनिरहेको छ । मेरो विचारमा उहाँ एउटा अद्भूत वीरांगना या भनौँ एक महान योद्धा हनुहुन्छ । कर्णको विचारमा माता सीताको बिहे गर्न राजा जनकले धनुष उचाल्नुपर्ने जुन प्रतियोगिता गरेका थिए, त्यसमा संसारभरबाट आएका राजा रजौटाका छोराहरु असफल भएका थिए ।
स्ययं भगवान रामले युवा अवस्थामा उचाल्न सकेको त्यो धनुष माता सीताले आफ्नो बाल अवस्थामै उचालेकी थिइन् । कुनै दिन सफाइ गरिरहँदा राजा जनकले आफ्नी छोरी सीताले शिव धनुष सजिलै एउटा हातले उठाएको देखेर अचम्म भएका थिए । छोरीको यस्तो अद्भूत तागत देखेरै उनको विवाह कम्तीमा उनीभन्दा ताकतवर पुरुषसँग गर्नुपर्ने सोची त्यो धनुष उचाल्ने प्रतियोगिता गरिएको थियो । त्यसकारण त्याग, तपस्या, सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति त माता सीता हुन् नै, त्यसभन्दा ज्यादा उनी एक योद्धा हुन् । अहिलेसम्म कसैले बाहिर नल्याएको यही कोणबाट माता सीतालाई चिनाउने अभियान काजलले आरम्भ गरेकी छिन् ।
माता सीता एक वीरांगना र योद्धा थिइन् भन्ने कुरा उनले बाल अवस्थामा नै शिव धनुष उचालेको घटनाले मात्रै होइन, उनका जीवनमा घटेका सबै घटनालाई हेर्दा पनि प्रमाणित हुन्छ । रावणले अपहरण गरी दुःख दिँदा पनि उनले कुनै सम्झौता गरिनन् । एक्लै आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउने र संस्कार दिने काम पनि उनले गरिन् । लव र कुशलाई उनले एक्लै हुर्काइनन् मात्रै सम्पूर्ण विद्याले निपुण बनाइन् । माता सीताले आफ्ना सन्तानलाई यति निपुण बनाइन् कि, एकपटक भगवान रामका सेनासँग युद्ध हुँदा समेत लवकुशसँग हार व्यहोर्नु परेको थियो ।
माता सीता यति बहादुर छोरी थिइन् कि उनले जस्तोसुकै चुनौती पनि सजिलै सामना गरिन् । माता सीताको यो रुप र पहिचानलाई उजागर गर्दा लामो समयदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरुको जीवनमा नयाँ उत्साह पलाउने कर्णको विश्वास छ ।
सीतालाई एक योद्धाका रुपमा संसारलाई चिनाउने काजलको अभियान सुरु भइसकेको छ । यसका लागि जनकपुरमा माता सीताको संसारकै अग्लो १ सय ५१ फिटको प्रतिमा बनाउने अभियान आरम्भ भइसकेको छ । यतिबेला त्यो प्रतिमा र त्यसको सेरोफेरो कस्तो हुने भन्ने डिजाइन ड्रइङका काम सम्पन्न भएका छन् ।
उनले माता सीताको त्यो अदभूत प्रतिमा निर्माणका लागि त्रेता युगमा राम सीताको स्वयंवर भएकै जनकपुरको रंगभूमि मैदान प्रस्ताव गरेकी छिन् । यसका लागि यसअघि नै जानकी मन्दिरका पुजारी, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री लगायत उच्च अधिकारी मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टीका मुख्य नेताहरुसँग भेटघाट र छलफल समेत गरिसकेकी छिन् । उनले गरेको प्रस्तावमा त्यसबेला भएका छलफलमा सबैले सराहना गर्दै त्यो कामका लागि सहयोग गर्ने बचन पनि दिएका छन् ।
माता सीताको १ सय ५१ फिटको प्रतिमा उनकै माइती भूमिमा निर्माण गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज गरी संसारकै एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने काजलको अभियानमा मौखिक रुपमा सबै अधिकारीहरुले स्वीकार्यता दिएको भए पनि त्यसबारे लिखित सम्झौता गर्न बाँकी नै छ ।
संसारकै अदभूत हुने यो प्रतिमा र त्यस सेरोफेरोको भव्य संरचना निर्माण कति सम्भव होला भन्ने आजको न्युजको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘म आफूलाई त्यस्तो आध्यात्मिक रुपमा त लिन्नँ । तर मलाई माता सीताले यो काम गर्न प्रेरणा दिनुभएको छ । मेरो यो अन्तरआत्माको बोली हो । मैले संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने गरी जनकपुर र त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नयाँ योजना प्रस्तुत गरेकी छु । यदि त्यसमा ढिलाई भए म आफ्नै जमिनमा भए पनि यो प्रतिमा बनाइछाड्छु । आखिर स्वयंवर गरिएको स्थान प्राप्त भएन भने पनि सिंगो जनकपुर उहाँको माइती नै त हो । र त्यसमा कहाँ स्थापित हुने भन्ने कुरा माताको इच्छाले पनि भर पर्ने कर्णको तर्क छ ।
सुन्दा असम्भव जस्तो देखिने यो योजना कर्णका लागि धेरै टाढा छैन । उनले माता सीताको यो प्रतिमाले जनकपुर मात्रै होइन, सिंगो नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने बताइन् । पृथ्वीमाथि शिव धनुष बोकेको माता सीताको १ सय ५१ फिटको प्रतिमाको निर्माण र त्यस प्रतिमा वरपरको सौम्य र भव्य माहोलले त्रेतायुगीन जनकपुरको झल्को दिने उनको विश्वास छ । सीताको यो प्रतिमाको अवलोकन र दर्शनका लागि संसारभरका हिन्दूहरु त जनकपुर आउने छन् नै, त्यसबाहेक पनि यो अदभूत संरचनाको अवलोकनका लागि संसारभरका मानिसहरु नेपाल ओइरिनेछन् ।
यसले त्यस क्षेत्रको र देशको पर्यटन त प्रवद्र्धन गर्ने छ नै त्यसबाहेक पनि हरेक महिलालाई माता सीताको प्रतिक मान्ने हाम्रो समुदायको महिला सशक्तीकरणमा ठुलो योगदान हुने छ । आजसम्म सीता मातालाई त्याग र सहनशीलताका रुपमा मात्रै देखाएर महिलाहरुलाई त्याग र सहनशीलताको मात्रै पाठ सिकाइएको छ ।
अब यो प्रतिमाको निर्माण त्यसको महिमाको प्रचारप्रसारले माता सीता सहनशील र त्यागी मात्रै होइन एक वीरांगना योद्धा पनि थिइन् भन्ने जानकारी सबै महिलाहरुलाई हुने छ । सीता माताको यो बहादुरीको महिमा सुनेर हरेक महिला सशक्त रुपमा समाजमा आफूलाई उभ्याउने छन् । उनको यो अदभूत यात्रा र योजनाको हामी सफलताको कामना गर्दछौँ । र काजल कर्णका माध्यमबाट आएको यो उत्कृष्ट योजनाको कार्यान्वयनका लागि हातेमालो गर्न ३ तहका सरकार र जनकपुरका स्थानीय अगुवाहरुलाई आह्वान पनि ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ५, २०७७, १४:५७:००